Mogadishu Journal » 2019 » February » 9
Mjournal :-Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in wada hadalkii uu hore u waday Turkigu aan wax midho dhal ah laga gaadhin, sidaas darteed, waxay dalbatay in dalal kale oo caalamka ahi qayb ka noqdaan wada hadalkaasi labada dhinac. Sidaasna waxa lagu sheegay kulan maanta ku...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray dalka Itoobiya si ay uga qayb-galaan Shir Madaxeedka Midowga Afrika oo berri ka furmaya Addis Ababa. Shir Madaxeedka Midowga Afrika ayaa sannadkan...
Askar dilal ka geystay Muqdisho oo gacanta lagu soo dhigay
Mjournal :-Taliska Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dilal ay Askar Boolis ah Muqdisho ugu geysteen dad shacab oo badankoodu ahaa dhalinta Mooto Bajaajta ku shaqeysta. Janeraal Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa shir jaraa’id uu ku qabtay Magaaladaani Muqdisho ka sheegay...
Afduub ka dhacay Magaalada Gaalkacyo & xiisad ka dhalatay oo ka taagan
Mjournal :-Saddex dhalinyaro ah oo ka soo Jeeda Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Puntland ayaa lagu afduubtay Koonfurta magaaladaas oo uu ka arimiyo maamulka Galmudug. Xiisad ka dhalatay afduubkan ayaa la sheegayaa iney ka aloosan tahay Magaalada, iyadoo arrintan si weyn looga...
ONF oo saxiixday heshiis hub ka dhigis ah
Mjournal :-Heshiis ay wada saxiixdeen Jabhada ONF iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ahaa in dagaalyahanada Jabhada lagu sameeyo hub ka dhigis, taasi oo guul la taaban karo u ah Guud ahaan Itoobiya gaar ahaan ismaamulka Soomaalida. Jabhada ONLF waxaa la aas aasay 1984,...
Garbahaareey oo markii ugu horeysay Booliis yeelatay
Mjournal ;-Taliyahaa Ciidanka Booliska Soomaaliya, General Bashiir Maxamed Cabdi (America) ayaa tababar u soo xiray in ka badan 300 oo Askari, kuwaas oo ka howl-geli doona gudaha Magaalada Garbahaarey. Ciidanka ayaa Lixdii bilood ee lasoo dhaafay Tababar uga socday Magaalada...